App-ka Telegram oo shaqada ka maqan maanta Bariga dhexe iyo Yurub… – Hagaag.com
App-ka Telegram oo shaqada ka maqan maanta Bariga dhexe iyo Yurub…
Posted on 29 Abriil 2018 by Admin in Technology // 0 Comments
App-ka lagu Magacaabo Telegram ayaa shaqada ka maqan saaka oo Axad ah Bariga Dhexe iyo Yurub iyo wadamo badan oo caalamka ah, shirkada ayaa ku sheegtay sababta in ay la xiriirto server-kooda oo aad u kululaaday ama weerar baaxad weyn oo elektroonik ah oo lagu soo qaaday.
Aap-ka Telegram ayaa ka maqan adeega Internet-ka oo ay ku jirto xataa website-kooda rasmiga oo sidoo kale ka maqan Internet-ka.
Aasaasaha App-ka Telegram Pavel Durov ayaa soo dhigay fariin bartiisa Twitterka oo ku sheegay in heer kulka Server-kooda uu aad u kululaaday taasi oo sababtay dhibaatooyinka dhinaca xiriirka dadka isticmaala App-kan ee ku nool Bariga Dhexe iyo Yurub, wuxuuna sheegay in ay ka shaqeynayaan wax ka qabashada ciladan.
Durov ayaa sidoo kale ku sheegay Tweet kale in laga yaabo sababo kale sida in weerar elektronic oo weyn in lagu soo qaaday Sida “DDoS” kaasi oo awooda inuu xiro oo shaqada ka joojiyo server-ka.
Ruushka ayaa ku hanjabay in la mamnuuco helitaanka Telegram kadib markii shirkada ka diiday amar maxkamadeed oo ahaa in ay u fududeyso hay’adaha amniga ee Ferderaalka Ruushka in ay la socon karaan fariimaha la isu diro ee dadka isticmaala App-Kan.
Laakiin Telegram ayaa caan ka ah dalka Ruushka, waxaana isticmaala App-kooda laba boqol oo milyan oo isticmaale adduunka oo dhan, waxa lagu doortay ayaa ah fariimaha la isu diro oo aan akhrin karin qeyb seddaxaad oo ay ku jiraan madaxda dowladaha.
Aasaasaha Telegram ayaa marar badan afka ku dhuujiyey in shirkadiisu aanay ku wareejinaynin furayaasha sirta ah maamulka Ruushka sababtoo ah iyaga oo aan dooneyn in xogaha sirta ee dadka lala wadaago cid walba.